ICasa Aurora kwiDolomites - I-Airbnb
ICasa Aurora kwiDolomites
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
UNksk. Emma kunye nomyeni wakhe uMaurizio bayakuvuyela ukukwamkela kule ndawo intle isanda kulungiswa evulekileyo entliziyweni yamaDolomites.
Le ndlu, ikwindawo ezolileyo kodwa ekujuleni kwelitye ukusuka embindini kunye nokuhamba imizuzu emi-3 ukusuka kwindawo yeski yaseDrei Zinnen, inamkela ngomoya ogqubutheleyo kwaye ikhathalelwe ukuya kweyona nkcukacha incinci.
I indawo evulekileyo luphawulwa materials umgangatho, ngokuqala stube majolica ukushushubeza ebusuku zakho, imigangatho naziiperile Verona kunye kaMoses, ezinemiqadi ngesandla-wabeka kudandalaza iinkuni fir kunye ngomfanekiso lidiza zadalwa ngumntu lomculi we lali.
Indlu ibekwe kumgangatho osezantsi ngayo villa nomnyango ezizimeleyo, yokupaka yabucala ezamahala, 1 lokuhlambela kunye ishawa, kwigumbi lokuhlala enkulu yesikhumba isofa, flat screen TV, itheyibhile fir kunye kwesitulo kunye Cyber ingcibi ikhitshi, nto leyo idala i antique- yokuqala isiphumo sale mihla.
I-staircase ikuthatha ikuse kwindawo yokulala, i-loft kunye nemiqadi eveziweyo, kunye nebhedi ephindwe kabini ekhanyiswe ngezibane ezilengayo kunye nefestile enombane kunye ne-remote-control control shutter roller.
Indawo evulekileyo ibekwe kumbindi wedolophu. Kukho kwiinkundla zentenetya zasePadola, kwindawo yokuzivocavoca, indawo yokudlala. Indawo efanelekileyo yokuhamba, ukuchola amakhowa, ukukhwela ihashe, inja yesileyi, ukunqumla ilizwe kunye nokutyibilika ezantsi, ukukhwela ikhephu, iitrayile ezinezihloko, ngeeferratas, iMTB okanye iindlela zebhayisekile ezifana neSan CAndido edumileyo - uhambo lweLienz.
U-Emma kunye no-Maurizio bakwamkela ngokobuqu kwaye bakukhaphe ukuya kwiNdawo eVulekileyo, apho ibhaskithi eyamkelekileyo iya kube ikulindile kwisidlo sakusasa sakho. Zikwakhona ukukunika lonke ulwazi oluluncedo lokuhlala kamnandi, ukucebisa uhambo, imisebenzi kunye nendawo yokungcamla ezona mveliso zibalaseleyo zasekhaya.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ndifumaneka kuyo nayiphi na imfuno.
U-Emma kunye no-Maurizio bakwamkela ngokobuqu kwaye bakukhaphe ukuya kwiNdawo eVulekileyo, apho ibhaskithi eyamkelekileyo iya kube ikulindile kwisidlo sakusasa sakho. Zikwakhona uk…
Iilwimi: Deutsch, Italiano, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Padola